MPANENDAKA TRATRAN’NY POLISY MPANAO FISAFOANA TEO AM-PANAOVANA NY ASA RATSINY - Madagascar Informations
25 octobre 2017 27 octobre 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Mpanendaka roa lahy 23 taona sy 26 taona no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny boriboritany voalohany etsy ANALAKELY ny alin’ny sabotsy 21 oktobra 2017 hifoha ny 22 oktobra 2017 teo teny ANALAKELY.
Teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy izy roa lahy ireto izao trà-tehaky ny Polisy izao. Novelesin’izy ireo tamin’ny tavoahangy ilay olona nendahiny ka rehefa tsy nahatsiaro tena dia nosintomin’izy ireo ny kitapo misy vola mitentina 300.000 Ariary sy finday ary antontan-taratasy maromaro.
Polisy nanao fisafohana no nahatazana izany ary dia avy hatrany dia nandray ny andraikiny ka nanenjika ireto nahavanon-doza.
Vokany: tratra ireo mpanendaka roa lahy rehefa avy nifanenjehan’ny polisin’ny boriboritany voalohany etsy Analakely. Niaiky ny heloka vitany moa izy roa lahy ireto ary dia efa natolotra ny fampanoavana ny raharaha, ary dia notanana am-ponja vonjy maika eny Antanimora izy roa lahy ireto.
← Visite de son Altesse Royale à M/car
Visite de son Altesse Royale à Iavoloha →
Mpanendaka 6 no voasambotra teny Ambohipotsy
25 juillet 2017 Madagascar Informations 0